Jiri akwa siri ike nke zuru oke iji mee ka azụmaahịa gị sie ike
Sony \_ Bravia S Seclet HD TV nwere ndebiri atọ HDI na Vidio, kọmputa, na vidiyo na vidiyo. Nkọwa a dị elu TV karịrị ike 3. 0 chọrọ. Ọ dakọtara na njikọ Bravia, na-enye gị ohere ijikọ usoro njikọ Bravia dị iche na HDTV. Samsung 7-4D HDTV na-enye atụmatụ dị egwu na ọnụahịa dị ọnụ ala.
Yabụ, ka ọ bụrụ na ị ga - egosi gị vidiyo ụfọdụ nke ihe na - aga ebe a ugbu a. N'ụbọchị atọ gara aga, ha ahụla mmiri mmiri karịa ka ha na-enwetakarị n'ọnwa. Obodo ekwuputala ọnọdụ ihe mberede ma anyị ga-ahụ mmiri ozuzo karịa ụbọchị ole na ole sochirinụ na-esote okporo ụzọ na ibibi ụlọ.
Biko gaa n'ihu na ajụjụ gị. Morningtụtụ ọma, ụmụ nwanyị, Kenneth Zena. Morningtụtụ ọma, Ken. Ikwu okwu site na Kenneth Zeneth na-enyere aka ma ọ dị ka obere ihe na-ekwupụta nkwupụta Fed. Yabụ anyị ga-anwale ọzọ. Michael na Jeff, i jiri okwu dị iche iche. N'ihi ya, echere m na ihe ikwuru ugbu a bụ osooso nke ngwakọta ọnụ, Michael.